चीन तेल आधारित रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > तेल आधारित रंग
तेल आधारित रंग निर्माताहरु
मुख्य फिल्म निर्माण सामग्री को रूप मा सिंथेटिक राल संग तेल आधारित रंग तेल चित्रहरु र प्राकृतिक राल रंगहरु को तुलना मा राम्रो यांत्रिक गुण, सजावट र सुरक्षा गुण छ।
तेल आधारित रंग को यस प्रकार को उत्कृष्ट फिल्म निर्माण गुणहरु र विशिष्ट कोटिंग गुण, जस्तै चमक, परिपूर्णता, कठोरता, लोच, मौसम प्रतिरोध, र रासायनिक जंग प्रतिरोध छ; यो ठीक संग र wet्ग गीला गर्न को लागी रंग मा रment्ग को फैलावट को सुविधा गर्न सक्नुहुन्छ; राम्रो भण्डारण स्थिरता र अन्य उत्पादन विशेषताहरु। मुख्य फिल्म बनाउने पदार्थ अनुसार, सिंथेटिक राल रंग alkyd राल रंग, एक्रिलिक राल रंग, polyurethane राल रंग र epoxy राल रंग मा विभाजित गर्न सकिन्छ।
तेल आधारित रंग व्यापक रूप मा मशीनरी उद्योग, यातायात, कृषि मशीनरी, बिजुली उपकरण, उपकरण, प्रकाश उद्योग, रासायनिक उद्योग, आदि को सतह कोटिंग मा प्रयोग गरीन्छ; धातु विज्ञान, पेट्रोलियम, जहाज निर्माण, पुल, राष्ट्रिय रक्षा, दीर्घकालीन इस्पात र उच्च तापमान (३०० â „conditions) अन्तर्गत अन्य उत्पादनहरु विरोधी जंग कोटिंग र फ्याक्ट्रीहरु, तहखाने, पार्किंग स्थलहरु, कार्यालयहरु, औषधिहरु, र खेल मैदानहरु को फर्श कोटिंग।
चीन मा एक पेशेवर तेल आधारित रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ तेल आधारित रंग। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक तेल आधारित रंग लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।